ဆွစ်ဇာလန်နှင့်သောအဓိကမြို့ကြီးများဖြစ်ကြသည်၏ Canton ကဘာတွေလဲ?
အဆိုပါဆွစ်ဇာလန် - တာဝန်ရှိသူတဦးကအမည် "ဆွစ်ဇာလန်အဖွဲ့ချုပ်" ဥရောပမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစှဲ, ဂျာမန်, ပြင်သစ်, အီတလီနှင့် Romansch ဒေသများပါဝင်သည်။
ဘယ်နှစ်ယောက် Canton, ဆွစ်ဇာလန်ရှိပြီး၎င်းတို့၏အမည်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ?
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမြို့တော်အောက်ပါ Canton 26 သို့ကွဲပြား:
Aargau, မြို့တော် Aarau
Appenzell အပြင် Rhodes, မြို့တော် Herisau
Appenzell အတွင်းပိုင်း Rhodes, Appenzell မြို့တော်
ဘေဆယ်-Land, မြို့တော် Liestal
Bern, မြို့တော် Bern
Friborg, မြို့တော် Friborg / Freiburg
Genève / ဂျီနီဗာ, မြို့တော်Genève / ဂျီနီဗာ
Glarus, Glarus မြို့တော်
Graubünden / Grischuns / Grigioni, မြို့တော် Chur
Delémontမှ Jura မြို့တော်
Luzern, Luzern မြို့တော်
Neuchâtel / Neuenburg, Neuchatel မြို့တော်
Nidwalden, Stan မြို့တော်
Obwalden, Sarnen မြို့တော်
စိန့် Gallen, စိန့် Gallen မြို့တော်
Schaffhausen, Schaffhausen ၏မြို့တော်
Schwyz, မြို့တော် Schwyz
Solothurn, Solothurn မြို့တော်
Thurgau, မြို့တော် Frauenfeld
Ticino / Tessin, Bellinzona, မြို့တော်
ဥရိ, Altdorf မြို့တော်
Vaud / Vaud, Lausanne မြို့တော်
Valais / Wallis ဟာ, ဇိအုန် / Sitten ၏မြို့တော်
ချဲ့ရန် image ကိုကလစ်နှိပ်ပါ - © pico - Fotolia.de
ဘယ်နှစ်ယောက် Canton, ဆွစ်ဇာလန်ရှိပြီး၎င်းတို့၏အမည်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ? - ချဲ့ရန် image ကိုကလစ်နှိပ်ပါ - © pico - Fotolia.de
ဆွစ်ဇာလန်5adjoining အိမ်နီးချင်းများရှိပါတယ်:
ဆွစ်ဇာလန်၏အလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံများ
ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများတွင်ဂျာမနီ - ကတ် & စာလုံး